🥇 ▷ LG waxaa iska leh calaamadaha ganacsiga LG M10, LG V60 iyo LG V70 ✅
LG waxaa iska leh calaamadaha ganacsiga LG M10, LG V60 iyo LG V70
LG waxaa laga yaabaa ama uma qorsheyn karto inay soo saarto taxane cusub oo casriga ah. Kaliya bishii hore, shirkaddu waxay ku dhawaaqday taxane cusub oo taleefanno casri ah oo la awoodi karo oo ku saabsan suuqa Hindiya, oo ay ku jiraan LG W10, LG W30 iyo LG W30 Pro. Hadda codsigii astaanta ganacsiga ayaa shaaca ka qaaday magaca taleefanka cusub ee loo yaqaan LG M10.
of 3 mid ka baxsan 3
Codsiga waxaa laga xareeyay Xafiiska Hanti-dhowrka Kuuriyada Waqooyi, waxayna xustay in sumadda M10 lagu xareeyay qeybta “taleefannada casriga”. Codsiga waxaa la gudbiyay Julaay 8, 2019.
In kasta oo ay jiraan warbixino sheegaya in tani ay noqon karto xariiq cusub, haddana waxaan dareemeynaa in LG W10 uu magac cusub ku helayo dalka LG ee waddankiisa. Tani wax aan caadi aheyn uma aha LG. Hal taleefan ayaa ku iibsan kara hal magac hal suuq isla markaana magac kale ku leh waddankooda. Tusaale ahaan, LG X6 (Korea) waa isla aaladda LG Q60. Waxaa sidoo kale loo yaqaanaa LG K12 Prime ee Brazil.
Tani waa mala awaal, oo LG M10 wuxuu noqon karaa kan ugu horreeya taxane cusub, oo aan ahayn taxanaha W.
Marka laga soo tago M10, LG wuxuu sidoo kale dalbaday calaamadaha ganacsiga ee loo yaqaan ‘V60 iyo V70’, kuwaas oo ah magacyada mustaqbalka magacyada taleefanka casriga ah ee LG V. Waxa ugu dambeeyay taxanaha V waa LG V50 ThinQ, oo la sii daayay horaantii sanadkan. Waxaa jira fursad aan ku heli karno LG V60 ThinQ xilli dambe sanadkaan.
LG wuxuu u leexanayaa Shiinaha ‘BOE’ taleefanka casriga ah ee OLED DISPLAYs maadaama ay gadaal ka dhacday Samsung XIGASHO: LG wuxuu u leexanayaa dhanka Shiinaha ‘BOE’ oo loogu talagalay soosaarida casriga ah ee OLED, sida Samsung gadaal
Boostada LG waxay tixraacdaa calaamadaha ganacsiga LG M10, LG V60 iyo LG V70 markii ugu horreysay ee ka soo muuqday xChip.ru.